हेनरी फोर्ड - Laltin.com
laltin tech media July 22, 2021
बीसौं शताब्दीको सुरूवातमा कारलाई विलासिताको वस्तु सम्भिइ्न्थ्यो ।त्यस समयमा मेकानिकहरूले हातबाटै एक-एक गरेर कार बनाउँथे, जसलेगर्दा कारको लागत धेरै हुन्थ्यो । कार महँगो भएकोले त्यसलाई थोरैले मात्रैविलासिताको लागि खरिद गर्थे । यस्तैमा हेनरी फोर्डले सस्तो कार बनाउनेफैसला गरे । यो एउटा क्रान्तिकारी विचार थियो । अमेरिकाका ठूला उद्योगपतिहेनरी फोर्डले दुनियाँमा सबैभन्दा पहिला कार बनाउने काम गरेका थिएनन् ।उनले त केवल पहिलो सस्तो कार बनाउने सपना देखे र आफ्नो सपनासाकार गरे । उनको मोडल टी कारले दुनियाँभर तहल्का मच्चाइदियो ।
३० जुलाइ १८६३ मा जन्मिएका हेनरी फोर्डले १९०१ मा केही मानिसहरूसँगमिलेर हेनरी फोर्ड मोटर कम्पनी स्थापना गरे । फोर्डसँग कम्पनीको मात्र १६प्रतिशत हिस्सेदारी थियो । छिट्टै नै अन्य साझेदारहरूसँग उनको विवाद भयोकिनकि उनीहरू कार महँगोमा बेच्न चाहन्थे जबकि फोर्ड सस्तो कार बनाउनचाहन्थे । उनका साझेदारहरू कारलाई धनीहरूको विलासिताको वस्तु मानिरहेकाथिए, जबकि फोर्ड त्यसलाई जनसाधारणसम्म पुन्याउन चाहन्थे । फोर्डले१९०२ मा उक्त कम्पनी छोडेर एउटा नयाँ कम्पनी स्थापना गरे । १९०४ माफोर्डले १७४५ वटा कारहरू बेचे । फेरि उनले मोडल-एन बनाए, जुनराम्रोसँग सफल भयो । तर फोर्ड आरामसँग कसरी बस्न सक्थे र ? उनी त बलियो र सस्तो कार बनाउन चाहन्थे । १९०७ मा उनले मोडल एनलाईतसुधार गर्नुपर्ने अनुभव गरे । फलस्वरूप १९०८ मा मोडल-टी बजारमा आयोजुन आशा गरेअनुरूप सफल भयो । यो कार यति सस्तो थियो कि आममानिसपनि यसलाई आरामले किन्न सक्थे । मोडल-टीको कारणले अचानक कारनिजी यातायातको प्रमुख साधन बन्यो । फोर्डले सस्तो कार बनाएर मध्यमवर्गकापरिवारहरूका लागि पनि आरामदेह बनाइदिए । हेनरी फोर्डको नामकारलाई धनीको वाहनबाट आममानिसको वाहन बनाइदिने मानिसकोरूपमा इतिहासमा स्मरण गरिने छ ।
बीसौं शताब्दीको सुरूवातमा अमेरिकामा मात्र दुई वटा वर्ग थिए- धनी रगरिब । हेनरी फोर्डले कारको प्रजातान्त्रिकरण गरेर अमेरिकाका कार चाहनेहरूलाईसर्वसुलभ बनाइदिए। मोडल-टी जनताको कार बन्यो र फोर्ड आधुनिकव्यापक उत्पादनका पितामह बने । फोर्ड आफ्नो सपना साकार गर्नको लागियति धेरै समर्पित थिए कि जतिजति मोडल-टीको बिक्री बढ्दै गयो उनलेआफ्नो कारको मूल्य घटाउँदै गए । १९२७ सम्ममा मोडल-टीको मूल्य ८५०बाट घटेर २६३ डलर भयो । उनी कारको मूल्य घटाउँदै गए तर कारकोबिक्री बढेको हुनाले उनको लाभ पनि बढ्दै गयो ।
कार सस्तो बनाउनको लागि व्यापक उत्पादन गर्नु आवश्यक थियो ।त्यसकारण फोर्डले कार निर्माणको लागि नयाँ तरिका प्रयोग गरे । योप्रयोगभन्दा पहिले कार एकै ठाउँमा रहन्थ्यो र सारा मेकानिकहरू त्यसमाएकसाथ पूर्जा फिट गर्थे, अर्थात् एक समयमा एउटै मात्र कार बन्न सक्थ्यो ।उनले यस्तो लाइन बनाए जहाँ कार एक ठाउँमा बन्न सुरू गरेर अर्कोठाउँबाट तयार भएर निस्किन्थ्यो । उनले मेकानिकहरूलाई छुट्टाछुट्टै ठाउँमाबस्न लगाए र कार एक ठाउँमा बन्दै अर्को ठाउँमा जाँदै गर्न थाल्यो जसलेगर्दा धेरै कारहरूको काम एक साथ हुन थाल्यो । उनले एउटा अग्लो खालकोलीक तयार गरे किनकि लिकको माध्यमबाट कारलाई एकछेउबाट अर्कोछेउमा ल्याउन सजिलो होस् र सारा काम उचाइमा गर्न सकियोस् ताकिमजदुरहरूलाई सजिलो होस् । यसबाट छिट्टै कारहरूको उत्पादन बढ्नथाल्यो र वार्षिक उत्पादन एक लाखबाट बढेर दुई लाखसम्म पुग्यो ।
लिकको प्रयोगले उत्पादन त बढ्यो तर यो काम मजदुरहरूको लागिनिरश भयो । मजदुरहरू कम्पनी छोडेर जान लागे, तब १९१४ मा उनलेमजदुरहरूका लागि ५ डलर दिने प्रलोभन दिए । जबकि त्यस समयमा धेरैकम्पनीहरूमा मजदुरहरूको तलब अढाइ डलर मात्र थियो । यसले गर्दाहजारौं मजदुर टाढा-टाढाबाट काम खोज्न आउन लागे । एकपटक त गेटमाजम्मा भएको मजदुरहरूको भीड तितर-बितर गर्नको लागि दमकलले पानी नैछुयाप्नु पर्यो । लिकको प्रयोगबाट कारहरू यति तेजले बन्यो कि १९१४ वाट१९१६ को बीचमा फोर्ड कम्पनीको नाफा ३ करोडबाट बढेर ६ करोड डलरपुग्यो । आठ घण्टा काम गरेको ५ डलर दिने निर्णय फोर्डको लागि धेरैलाभकारी प्रमाणित भयो ।
हेनरी फोर्ड बीसौं शताब्दीका महानतम र सबैभन्दा महत्वपूर्ण उद्योगपतिहरूमाएक मानिन्छन् । उनले ब्यापक-उत्पादनको लाइन विकसित गरेर उत्पादनकोप्रकृति नै बदलिदिए । उनले मोटर कारको आविष्कार गरेनन् तर यसलाईजनसाधारणको वाहन बनाउने अभूतपूर्व काम गरे । उनी आउनुभन्दा पहिलाकार धनीहरूको मात्र वाहन थियो, महँगो र अव्यवहारिक थियो । फोर्डलेयसलाई सबै कुरा बदलिदिए । आफ्नो मोडल-टीको माध्यमबाट उनलेऔद्योगिक क्रान्तिको सूत्रपात गरे र यस प्रक्रियामा आफैँ पनि सफल र धनीभए ।
Previous: थोमस बरेल-
Next: अनीता रोडिक
Ex-King Gyanendra Shah Interview with Prem Baniya
B.P. Koirala Interview-1977